Iindaba - ICanton Fair 2019 (Okthobha, Ekwindla)
I-126th China yokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle i-Fair 2019
Xinlian welding yima yima 8.0X07
I-Canton Fair 2019 (ngo-Okthobha, iAkwindla) -i-China yokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle i-Fair 2019 iza kuza kwisikhumbuzo sayo se-126th e-China yokuThumela kunye nokuThumela ngaphandle ePazhou Complex, e-Guangzhou ngo-Okthobha u-15 ukuya ku-19 (i-Elektroniki kunye neziXhobo zoMbane zoMbane), ngo-Okthobha 23 ukuya ku-27 ( Iimpahla zabathengi, izipho kunye nokuhonjiswa kwasekhaya), kunye no-Okthobha 31-Novemba 4, 2019 (Izixhobo zeOfisi, amatyala kunye neebhegi, kunye neMveliso yoLonwabo, izixhobo zoNyango kunye neMveliso yezeMpilo, ukutya, izihlangu, Impahla eyolukiweyo kunye neMpahla, i-International Pavilion)!
Unako nokungenelela ngaphakathi kwi-Yiwu Fair 2019 -I-China yama-25 ye-Yiwu yeZinto zoRhwebo zamanye amazwe, umboniso wezorhwebo wase China obanjelwe e-Yiwu, iziko elikhulu lezorhwebo e-China.
Njengorhwebo olukhulu lolwazelelelo olunzulu kunye nokugxininisa, ukuThunyelwa kweTshayina kunye nokuThunyelwa ngaphandle kweChina - I-Canton Fair @ China yokuThumela kunye nokuThumela ngaphandle ePazhou Complex, eGuangzhou kubonisa ngaphezulu kwe-150,000 yeentlobo zeemveliso zaseTshayina ezisemgangathweni kunye nezinto zorhwebo zaphesheya ezineempawu ezahlukileyo. Izinga lokuhlaziywa kweemveliso zaseTshayina lingaphezulu kwama-40% kwiseshoni nganye. Kuxhomekeke kwizibonelelo zaseTshayina kushishino lokuvelisa kunye nokuqhelanisa nemfuno yentengiso yamanye amazwe, iCanton Fair ibonisa iintlobo ngeentlobo zeemveliso ezikumgangatho ophezulu ezinexabiso elifanelekileyo.
Ngenkxaso evela kubabonisi abaninzi kunye neendwendwe, i-China yokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle (i-Canton Fair) ngoku iyeyona mboniso yorhwebo ibanzi kunye nembali inde, inqanaba eliphezulu, elona nqanaba likhulu, elona lipheleleyo kwimiboniso eyahlukeneyo, kunye nolwabiwo olubanzi abathengi baphesheya kunye nengeniso yeshishini enkulu e China.
Ukusukela oko yasekwa le nkampani, siye sachongelwa ukuvelisa uthotho lweetotshi ze-MIG / MAG, iitotshi ze-TIG, iitotshi zokusika iplasma yomoya kunye nezinye izinto ezinxulumene noko. Iimveliso zethu zidlulisile ukuqinisekiswa kwe-CE, isatifikethi seRoHS, iintlobo ezipheleleyo kunye neenkcukacha, umgangatho ophezulu kunye nexabiso lokhuphiswano Ngomgangatho obalaseleyo kunye nenkonzo egqibeleleyo, inkampani iphumelele ukubonwa ngokubanzi kunye nendumiso ngamxhelo mnye evela kubathengi. Iimveliso zayo zithengiswa kakuhle kumazwe angaphezu kwama-50 nakwimimandla, kwaye iseke ubuhlakani bexesha elide kunye neenkampani ezininzi ezaziwayo.
Iqela lethu liza kuma kwi-8.0X07, apho iintlobo ngeentlobo zeetotshi ze-MIG TIG Plasma ziya kubakho. Wamkele utyelelo lwakho!